रियल एस्टेट स्वामित्वको लागि भूमि ट्रस्ट सेवा
भूमि ट्रस्ट के हो?
एक भूमि विश्वास हामी एक कागजात हो जुन तपाईले निजी सम्पत्तिको स्वामित्व लिन अनुमति दिन्छ त्यसैले तपाईंको नाम सार्वजनिक रेकर्डमा शीर्षकमा देखा पर्दैन।
चलो तपाईं कार भाँडामा पाउने बताउनुहुन्छ। तपाईंसँग बीमाको $ 1 मिल्यो। तर तपाईंले स्टक ब्रोकरमा हिँड्नु भयो र तपाईले $3मिलियनको लागि मुकदमा पाउनुभयो। यदि तपाईं आफ्नो घरमा आफ्नो घर र लगानी गुणहरू स्वामित्व गर्नुहुन्छ भने, वकीलले तपाईलाई सजिलै संग आफ्नो घर र सार्वजनिक रेकर्डमा कुनै अन्य गुणहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं घरको मालिक हुनुहुन्छ भने, यसले केही वित्तीय स्थिरता देखाउँदछ र वकीललाई मुद्दा फाइल गर्न सम्भावित हुनेछ।
विरोधी वकीलले तुरुन्तै तपाईंको घरको छेउमा उभ्याउन सक्छ, आफ्नो ढोकामा धकेल्दै गर्दा तपाईं रातभर खाँदै हुनुहुन्छ र तपाईलाई आफ्नो सबै छिमेकीको सामु आफ्नो मुकदमा हात पुर्याउनुहुन्छ। तथापि, जब तपाईंको घरको भूमिमा विश्वास छ भने, तपाईंको स्वामित्व लुकेको छ। तपाईंको भूमि भरोसा सार्वजनिक रेकर्डमा दायर गर्न छैन। यसले तपाईंको स्वामित्व निजी राख्छ। कसैले तपाईंको घरको मालिकलाई थाहा छैन तर तपाईं।
जमीनको भरोसा चार घटक छ: नम्बर 1 निपटान हो। यो तपाईं हो किनभने तपाईं हो कि कसैले विश्वास सिर्जना गर्ने हो। नम्बर2ट्रिसी हो। विश्वासको सीमा अन्तर्गत विश्वासको विश्वास ट्रस्टको नियन्त्रण। यो बहिनी वा सासु, विश्वसनीय साथी वा परिवारको सदस्य हुन सक्छ। तपाईंको गोपनीयता बढाउनको लागि, यो तपाईंको सबैभन्दा राम्रो नाम बिना कसैले छान्नु भन्दा राम्रो हो। सबै ट्रस्टहरूलाई एक ट्रिसीको आवश्यकता छ तर यस प्रकारको विश्वासको साथ, भरोसाले उनीहरुको दायरा नियन्त्रण गर्दछ। नम्बर3लाभार्थी हो। त्यो एक हो जसले विश्वासको सबै लाभ प्राप्त गर्दछ। त्यो तपाईं हो (वा एक वा बढी व्यक्तिहरु वा कम्पनीहरू जुन तपाईले उल्लेख गर्दछन्)।
लाभार्थी को सबै नियन्त्रण हुन सक्छ। लाभांशले खरीद गरेको बेला बेच्न सक्छ र बेच्न सक्छ। यसबाहेक, लाभार्थी एक हो जसले सम्पत्ति रिफाइन गर्न सक्छ वा लगानीको गुणबाट भाडा आय इकट्ठा गर्न सक्छ। अन्तमा, नम्बर4विश्वासको कोर्प हो। कार्पस राजधानी वा प्रिन्सिपल (मूल्यका वस्तुहरू) विश्वास भित्र छ।
एक भूमि ट्रस्ट को लाभ
ठूलो कुरा यो हो कि सबै शीर्ष कर फायदेहरु रणनीति मा रहछन। ठीकसँग संरचित विश्वासको साथ, जब तपाईं आफ्नो घर बेच्नुहुन्छ भने कर फायदाहरू बाँकी छन्। यदि तपाईं घरमा टाढा पुग्नु भयो भने अन्तिम5वर्षमा दुई बाहिरका लागि तपाईले एक व्यक्तिको लागि लाभको $ 250,000 वा एक विवाहित जोडीको लागि $ 500,000 माथि बेचेर मुनाफामा कर तिर्न आवश्यक छैन, जब संरचित ठीक छ।
तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको कुरा स्वामित्वको गोपनीयता हो।
ऋणदाताले के भन्नेछ?
Garn - 1982 को सेन्ट जर्मेन डिपोजरी संस्था अधिनियम विशेष गरी एक को अनुमति दिन्छ कि एक भूमि को किसिम को भूमि को प्रकार मा विश्वास को लागी को लागी हामी बिक्री को बिक्री मा बिक्री को ट्रिगर को बिना। यसको मतलब यो हो कि बैंकले हस्तक्षेप बिना देशमा ट्रान्सग्रेजी सम्पत्तिलाई मार्जेन्टल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्छ। यो उधारो छ जब सम्म उधारकर्ता एक लाभार्थी बनी छ, सम्पत्ति मा पाँच भन्दा कम आवास एकाइहरू हुन्छन्, विश्वास पुनर्व्यवस्थित छ र अरूलाई कब्जा गर्न अधिकारहरू प्रदान गर्दैन।
1982 को संस्था अधिनियम
TITLE 12> अध्याय 13 § 1701-3
§ 1701J-3। बिक्री-बिक्री-बिक्री निषेध
(d) निर्दिष्ट स्थानान्तरणको छूट वा
वास्तविक सम्पत्ति ऋणको सम्बन्धमा
आवासीय वास्तविक सम्पत्तिमा एक लीन द्वारा सुरक्षित छ जसलाई कम्तिमा पाँच भन्दा कम समावेश छ
आवास इकाईहरू, मा एक आवास इकाई मा आवंटित स्टक मा एक लेनदेन सहित
सहकारी आवास निगम, वा आवासीय निर्मित घर, a
ऋणदाताले आफ्नो बिक्रीको बिक्री-बिक्री-बिक्री को अनुसरण गर्न सक्दैन-
(8) एक अन्तर vivos विश्वास मा एक हस्तांतरण
जो उधारकर्ता हो र एक लाभार्थी बनी छ र जो एक सम्बन्धित छैन
सम्पत्ति मा कब्जा को अधिकार को हस्तांतरण; वा
(अन्तर vivos विश्वास = settler को जीवनकाल को समयमा सृजित एक विश्वास। निपटान एक हो जसले विश्वास सिर्जना गरेको छ। भूमि को प्रकार को भरोसा जो एक अंतर vivos विश्वास को संदर्भित गर्दछ।)
म एउटा ट्रस्ट ट्रस्ट प्रयोग गर्न सक्छु?
सबै 50 राज्यहरु मा भूमि को भरोसाहरु को उपयोग गर्दछ। केहि राज्यका नियमहरूले भूमि धारणको विशिष्ट सन्दर्भ गर्दैन तर मानिसहरूले तिनीहरूलाई सबै राज्यहरूमा प्रयोग गर्छन्। केहि मान्छे यसो भन्दै गल्ती गर्दछ, "मेरो राज्यको कानुनहरूमा भूमि ट्रस्टहरू उल्लेख गरिएको छैन, त्यसैले तिनीहरू कानुनी होइनन्।" खै, कस्ता कानुनहरू छन् जुन कसैलाई रातो जूता लगाउन सक्छन्? सोफेमा पुन: रेखा? घुमाउरो स्ट्रारबाट पीऊ हामीले सबै काम गर्दैनौं कानून कानून किताबहरु कोडित। साधारण कानून, को रूप मा विरोध वैधानिक कानून, कसरी कानून र अन्य सामान्य अभ्यासहरू व्याख्या गरिएको छ र सामान्यतया वर्षहरूमा स्वीकार्य छ। ट्रस्टहरू सामान्य नियमको भाग हुन् जुन साधारणतया शताब्दीहरूमा स्वीकार्य भएको बेलासम्म उनीहरूका विरुद्ध कानुनी कानुनहरू छैनन्। यस नियमको रूपमा कुनै कानुनहरू छैनन्, कुनै पनि 50 यूएसमा समावेश छ कि भूमि ट्रस्टहरूको प्रयोगको विपरीत हो।
रियल एस्टेट लिपि कथाहरू
हाम्रो ग्राहकहरु मध्ये एक को आफ्नो घर मध्ये एक को अगाडी यार्ड मा एक पड़ोसी पैदल थियो। उनले तिनको टाँस्न तोडे, रगत खानु परेको थियो र मर्नुभयो। उनीहरूको सबै चीजहरूको लागी उनीहरूको बीमाले के गर्न सक्दछन् भन्दा बढी तरिकामा मुकदमा लागेका थिए। यदि उनीहरूले एकै ठाउँमा आफ्नो सम्पत्तिको भरोसामा सम्पत्तिको स्वामित्व गरेका थिए कि सम्भव भएन। यो विश्वास छैन कि दायित्व दायित्व समाप्त गर्दछ। यो त्यो हो, हामी तपाईंको भूमि भरोसा संरचना को तरिका हो, कसैले तपाईंलाई सम्पत्ति-होल्डिङ ट्रस्टमा तपाईलाई रुचि राख्नुको बारेमा थाहा छैन। त्यसोभए, यो रहस्य हो जसको लागि वकील मुकदमा छ। तिनीहरूले यो सङ्कलन छ कि यो पनि थाहा पाउन धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्नेछ।
हाम्रो कार्यालयमा एक सहयोगीले वाशिंगटनको अवस्थामा आफ्नो पहिलो आय सम्पत्ति खरीद्यो। यो एक रन-डाउन6इकाई अपार्टमेंट इमारत थियो। उनले यसलाई ठीक गर्न एक ठेकेदारलाई भर्ती गरे। तर con-tractor एक कलाकार कलाकार हुन सकियो। उसले एक कानूनी युद्धमा पायो जसले4वर्षसम्म पुग्यो र उसलाई $ 157,000 खर्च गर्यो। यदि उनले केवल एक कुरा गरेको थियो भने आफ्नै सम्पत्तिमा आफ्नै मालिकको सट्टामा उनीहरुको सम्पत्तिको स्वामित्व छ। त्यो सम्भव भएन। तर बरु, विरोधहरूले देखाए कि उनले एक घर र एक लगानी सम्पत्ति स्वामित्व गरेका थिए, त्यसैले तिनीहरूले मुकदमा गर्ने निर्णय गरे।
त्यसैले, तपाईंको सम्पत्तिको स्वामित्वमा रहेको तपाईंको भूमि भरोसाले तपाईंलाई आफ्नो घर, तपाईंको कार, तपाइँको बैंक खाता गुमाउने र अर्को 25 वर्षको लागि garnished तपाईंको भविष्य आय को 20% बाट बचाउनको लागि सुरक्षा दिन सक्छ। फेरि, यो, एक्लै, एक सम्पत्ति सुरक्षा उपकरण होइन। यो उद्देश्य तपाईंको रियल एस्टेटलाई पिरी आँखाबाट बचाउन हो। तपाईंको नाममा तपाईंको अचल सम्पत्तिमा शीर्षक राख्नुको अतिरिक्त सबैको लागि, यो तपाइँ र ती व्यक्तिहरूको बीचमा अवरोध प्रदान गर्दछ जुन तपाइँको मनमा सबैभन्दा राम्रो चासो छैन। यसकारण, यसले तपाईंको मुकदमा दाबी गरिने मौका पाउदछ।
कल कम्पनीहरु एक प्रतिनिधि संग बोल्न को लागी शामिल। तपाईले अर्डर गरेपछि, हामी तपाईंलाई तपाईंको भूमि ट्रस्ट प्रश्नावली इमेल गर्नेछौं। तपाईं प्रश्नावली पूरा गर्नेछ र फ्याक्स द्वारा फर्काउनु हुनेछ। तपाईंका कागजातहरू तयार हुनेछन्। विश्वास डीडी, जुन लगभग 12 पृष्ठहरू सिर्जना गरिनेछ, सिर्जना गरिनेछ। तपाइँ यसलाई घरमा वा सुरक्षित जम्मा बक्समा तपाईंको फाईल क्याबिनेटमा राख्नुहुन्छ। अनुदान दिईएको छ, तपाईंको सम्पत्तीलाई तपाईंको नाम बाट तपाईंको विश्वासमा हस्तान्तरण गर्न पनि तयार हुनेछ। यो कागजात काउन्टी रिकर्डरको अफिसमा काउन्टीमा रेकर्ड गरिएको छ जहाँ सम्पत्ति स्थित छ। फायदेमंद रुचि कागजात को असाइनमेंट, जुन तपाईंको सम्पत्ति मा लाभप्रद एक कम्पनी, व्यक्ति या भरोसा रहन को लागी हस्तांतरण को लागि पनि शामिल हुनेछ यदि तपाईं यो मुफ्त विकल्प चुन्नुहोस।